Vita ny tatitry ny FMI: andrasana ny fampidinana ny vidin-tsolika | NewsMada
Vita ny tatitry ny FMI: andrasana ny fampidinana ny vidin-tsolika
Mihatsara ny tontolon’ny toekarena eto Madagasikara, araka ny tatitra nataon’ny iraky ny FMI. Nahitana fahatsarana ny harinkarena faobe, 5,2 %, ny taona 2018, fa amin’ity taona 2019 ity, hiezaka hampitombo izany ny fitondrana ankehitriny . Eo am-pandrafetana ny lamina toekarena izao ny fitondrana ho an’ny taona 2020. Hitan’ny iraky ny FMI koa, araka ny tatitra nataony ihany, ny ady amin’ny kolikoly sy ny ady amin’ny fahantrana izay mila ezaka mafy ankehitriny.
Amin’izao fotoana izao, mahita ny FMI fa manao ezaka ny Banky foibe eo amin’ny fifanakalozana. Nasian-teny koa ny momba ny famatsiana angovo, ny fanamboarana fotodrafitrasa, sy ny fiahiana sosialy. Ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana, araka ny nambaran’ny minisitry ny Toekarena sy ny vola, Randriamandrato Richard, afantoka indrindra amin’ny tombontsoam-bahoaka. Laharam-pahamehana sy andrasana izany izao ny fampidinana ny vidin-tsolika sy ny fanatsarana ny famatsiana herinaratra avy amin’ny Jirama. « Araka ny fanamby nataon’ny filohan’ny Repoblika, tsy maintsy hahena ny vidin-tsolika ary efa nanaiky izany ireo mpandraharaha », hoy ny minisitra Randriamandrato Richard.
Misy rahateo ny famatsiam-bola « Facilité élargie de crédit » (Fec) avy amin’ny FMI hanatanterahana drafitrasa faritan’ny fitondram-panjakana. 44,25 tapitrisa dolara ny Fec fahatelo azo tamin’izany, ny taona 2018. Ny fitambaran’ny Fec rehetra niampy io tapany fahatelo io, nahatratra 220 tapitrisa dolara noho ny fahitan’ny FMI ny fihatsaran’ny harinkarena faobe eto Madagasikara. Anisan’ny nampitombo izany koa ny fahatsaran’ny vokatra lavanila sy ny vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, sy ny vokatry ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany.